ကားအတွင်းခန်းသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ - သဘာဝအရအားလုံးသောသန့်ရှင်းရေး
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / ကားတစ်စီးပြည်ထဲရေးသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များ
အဆိုပါ အားလုံးရည်ရွယ်ချက်သန့်ရှင်းရေး စက်ရုံဇီဝပျက်စီးနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမပါဘဲထုတ်ယူရန်သဘာဝနှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအင်ဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်သားရေ၊ ကော်ဇော၊ အပါအ ၀ င်၊ ကြွေထည်၊ အထည်ကဲ့သို့သောသားရေ၊ ကော်ဇော၊ ပိုးထည်၊ OPS အိမ်တွင်းကားအတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းစက်သည်အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲခေါင်းမာသောအစွန်းအထင်းများစွာကိုအလွယ်တကူပြိုကွဲနိုင်သည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝ Eco-friendly သန့်ရှင်းရေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပါပဲ!
♣အဆင့်မြင့်, ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီး, ပိုမိုနက်ရှိုင်းသန့်ရှင်းရေးဖော်မြူလာ။
♣လျင်မြန်စွာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာစင်ကြယ်သောအတွင်းပိုင်းပလတ်စတစ်, ဗီနိုင်း, သားရေ, ရာဘာ, ပင် LCD screen များ။
LCD screen များ, dashboards, တံခါးရွက်နှစ်ရွက်, အလယ်ဗဟို consoles စ, ကကျယ်ပြန့်တဲ့ကားအတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုသမျှ, ဒါပေမယ့်လည်းအဘို့အပင်ပိုကောင်း
အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေးအကျင့်ကိုကျင့်။ အဆိုပါကောင်းသောအရာကိုသင် finish ကိုမှအတောက်ပကောက်နိုင်နေသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးအပေါ်ကိုလေပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်
နှင့်မည်သည့်မှိုင်းညို့သကြီးတစ်ဦးအားမိုက်ခရိုအထည်ရှိခြင်းနှင့်အတူသုတ်။ အသုံးချအနည်းငယ်မျှသာအားထုတ်မှုနှင့်အတူတစ်လှည့်လည်ဖယောင်း Applications ကိုအသုံးပြုပါ။
အသစ်မော်တော်ယာဉ်အနံ့ရုံအနည်းငယ်ရောင်အရွက်။ ဒါဟာင် ကားတစ်စီးအတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန် နှင့် အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်
Natural All Purpose Cleaner - အကောင်းဆုံးအိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ
ယခု မှစ. ပိုးမွှားလျော့ကျစေအတွက်လွယ်ကူသောခေါင်းမာအစွန်းအထင်းမှနှုတ်ဆက်ပြော!
ဇီ ၀ ပျက်စီးနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Citrus ဆီကိုထုတ်ယူရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်လိမ္မော်ရောင်အင်ဇိုင်းတစ်ခု၊
1 ။ လေပေါ်မှာနှင့်အဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင်သုတ်။
2 ။ quick ထိုးဖောက်မှု, ထိုအစွန်းအထင်း softens ။
3 ။ Citrus ၏ထုတ်ယူခြင်းလုံခြုံစွာဖြစ်ပါတယ်။
4 ။ အရသာလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်အနံ့အနံ့မရှိဘဲဖြစ်ပါတယ်။
5 ။ ဘက်စုံသုံးနှင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်အဘို့ကို dual ရည်ရွယ်ချက်။
6 ။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသော, ပရီမီယံကားတစ်စီးသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်င် ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်ကားတစ်စီးအတွင်းပိုင်း.
ရဲ့ရိုးသားဖွစျပါစေ, အဘယ်သူမျှမဆိုးအနံ့တစ်ခုကားထဲတွင်လှည့်ပတ်စီးလိုလား။ သငျသညျအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ,
အံ့သြဖွယ်အနံ့နှင့် ops လိမ္မော်ရောင်အင်ဇိုင်းဆပ်ပြာကားတစ်စီးအတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေးများအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကားအတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းသုံးပစ္စည်းကိုပေး။ 500 ဂရမ်အမှုန့်, ​​500ml သန့်စင် (အရည်), 5L ကားထိုင်ခုံအစွန်းအထင်း remover ။
တဦးတည်း (6 ဂရမ်န်းကျင်) လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှင့်အညီအမျှတ္ထုရဲ့မျက်နှာပြင်ကလေပေါ်မှာပကသုတ်, 500 ML ရေဖြည့်စွက်!
ကားအတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေးအထောက်အကူများကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
အိမ်သူအိမ်သား, မော်တော်ကားပြည်ထဲရေးသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန် (လိမ္မော်ရောင်အင်ဇိုင်းတွေဆပ်ပြာ)
စျေးနှုန်း အမေရိကန် $ 7.50 / 1 Bag (FOB Ningbo / ရှန်ဟိုင်း)
MOQ 500kgs (1000 အိတ်)
ကုန်ပို့ရက်စွဲ 152-20 ရက်ပေါင်းဝန်းကျင်။